हामी निर्वाचनको घोषणासँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा छाै‌ं–नारायणकाजी श्रेष्ठ - मूल्याङ्कन अनलाइन
हामी निर्वाचनको घोषणासँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा छाै‌ं–नारायणकाजी श्रेष्ठ
मूल्याङ्कन अनलाइन | January 18, 2017
(नेपाली जनता अहिले संविधान कार्यान्वयन पूर्णताको ब्यग्र प्रतिक्षामा छन् । संविधान कार्यान्वयन पूरा हुन २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसदको निर्वाचन गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । त्यसैले अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसरी नै निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न लागी परेको छ । यसै क्रममा माघ ५ गते माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सरकारले एक साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारी गरिराखेको खुलासा गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेता प्रकाशसँग मूल्याङ्कन अनलाइनका लागि कमल गिरीले लिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । – सं)
मूल्याङ्कन : तपाईंले सरकारले निर्वाचनको घोषणा एक साताभित्र गर्ने तयारी गरिराखेको दावी गर्नुभएको छ । चुनावको तिथिमिति कहिले हुनेवाला छ ?
नारायणकाजी : निर्वाचनको घोषणा त एक साताभित्र हुनै पर्छ । अहिले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने समयको वाध्यता हो ।
मूल्याङ्कन : निर्वाचन सम्भव तुल्याउनका लागि त सत्तापक्ष, विपक्ष र मधेसवादी पार्टीहरुबीच न्यूनतम सहमतिको जरुरी पर्दछ । यस सन्दर्भमा के कति काम भइरहेछ ?
नारायणकाजी : गृहकार्य भइरहेछ । हाम्रो वटमलाइन भनेको २०७४ माघभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । यस कुरालाई हामी कुनै पनि हालतमा छाड्न सक्दैनौं ।
मूल्याङ्कन : भने पछि अब यस विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच कुनै अन्तरविरोध छैन ।
नारायणकाजी : सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्ने भनेको सबै पक्ष निर्वाचनमा आउने आशामै त गर्ने हो । किनभने, मधेसकेन्द्रित पार्टीहरुले पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं भनेर सरकार र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वसँग वार्ता गरेका हुन् । त्यसैको आधारमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबुल भएको छ । र, अहिले संसदमा त्यो छलफलको प्रक्रियामा गएको छ । छलफलबाट कुनै न कुनै निष्कर्षमा पुगिन्छ । तर, पर्खेर बस्यौं भने निर्वाचन नहुन सक्छ । मधेसकेन्द्रित साथीहरुले पनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ ।
मूल्याङ्कन : एक सातामा निर्वाचन घोषणा हुन्छ भन्नुको अर्थ माघ फागुनमै गरिने भनेको त होइन ?
नारायणकाजी : होइन, अहिले त घोषणा न हुँदैछ । चुनाव त आगामी वैशाखको अन्तिम हप्ता वा जेठको पहिलो हप्तामा हुने हो ।
मूल्याङ्कन : चुनाव कुन प्रकारको हुने घोषणा हुँदैछ ? स्थानीय निकायको, स्थानीय तहको ?
नारायणकाजी : पुनर्संरचना आयोगले रिपोर्ट बुझाइसकेकोले अब हुने निर्वाचन भनेको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय संंसदको नै हो नि !
मूल्याङ्कन : निर्वाचनअघि साना दलहरुसहित सत्ता समीकरणको विस्तारको पनि चर्चा छ । के मधेसी दल र राप्रपा पनि सरकारमा जान्छन् ?
नारायणकाजी : पार्टीको दृष्टिकोण, नीति सरकारमा जानुपर्छ नै भन्ने हो । त्यसो त हामी प्रमुख पार्टीहरु एमालेसहित सहभागी भएर निर्वाचन सम्पन्न गरौं भन्नेमा नै छौं । एमालेलगायत अरु कुनकुन दललाई सहभागी गराउन सकिन्छ त्यसको लागि हामीले दायरा व्यापक बनाएर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ ।
मूल्याङ्कन : राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा आउन करिबकरिब सहमति भए भन्ने चर्चामा छ नि !
नारायणकाजी : प्रधानमन्त्री र उहाँहरुबीच कुराकानी भएको आधारमा भन्ने हो भने त्यसो हुन सक्छ ।
फोटो : हीरा महर्जन / मूल्याङ्कन अनलाइन
« घरेलु उद्योगतर्फ आकर्षित हुँदै महिला (Previous News)
(Next News) ‘किराँत साझा धर्म’ »